Zvikwata 4 zvorwira mukombe | Kwayedza
Zvikwata 4 zvorwira mukombe
29 Apr, 2022 - 08:04 2022-04-29T08:33:49+00:00 2022-04-29T08:26:15+00:00 0 Views
HAKUDANWE anonzwa nemusi weMugovera uye neSvondo apo zvikwata zvina zvasara mumutambo weDivision One Axis Solutions Super 8 zvinoti Simba Bhora FC, Herentals Under-20, Golden Eagles neTrojan Stars zvichatatsurana musemi-final.
Musi weMugovera , kuchatambwa semi-final yekutanga iyo ichaona Herentals U-20 ichibandana neSimba Bhora FC kunhandare yeMorris Depot muHarare kuchiti musi weSvondo Golden Eagles (Gondo Harishaye) ichatamba neTrojan Stars kuEllis Robins muHarare zvekare.
Murairidzi weSimba Bhora FC, Arthur Tutani, anoti chikwata chake chiri kutokunya zvakasimba sezvo vari kuda kuhwina mumutambo uyu.
Achitaura pamusoro pekukundwa kwavakaitwa neChegutu Pirates, Tutani anoti mikombe yakaita seAxis Solutions Super 8 mikuru uye vari kuukoshesa sezvo vachida kupedza mwaka uno vaine mikombe yakawanda.
“Sechikwata, tiri kufara nematambiro atiri kuita mwaka uno. Mitambo yakaita seweAxis Solutions Super 8 Cup uyu unotibatsira kuti tipe vamwe vatambi mikana sezvo rwendo ruchiri rurefu kusvika tapedza mwaka wegore rino.
“Takanangana nemutambo weAxis Solutions Super 8 Cup, tiri kuda kuuhwina. Asi, tichange tichitora mutambo sekuuya kwaunenge uchiita dzamara tasvika kufainari. Hakuna asingade kuhwina mukombe uye isu tiri kuudawo mukombe uyu,” anodaro Tutani.
Kuchiti murairidzi weGondo Harishaye, Gilbert Mushangazhike – uyo chikwata chake chakaumburudza Ngezi U19 svondo radarika kunhandare yeBaobab uko chakahwina 2-1 – anoti vari kudawo mukombe uyu zvakanyanya.
Gondo Harishaye ichasangana neTrojan Stars iyo yakakunda Commando Bullets 2-1 svondo radarika mumutambo wakatambirwa kuTrojan, kuBindura.
Mushangazhike anoti ari kutarisira zvikuru kufambira mberi kwechikwata chake mumutambo uyu.
“Mwaka wakareba uye kune vamwe vatambi vasiri kuwana mukana wekutamba saka ndivo vatiri kupawo mukana mumutambo uyu apo tiri kuzama kubata zvinangwa zvedu zvose zvemwaka uno.
“Tave kutarira mitambo yedu iri mberi uye ticharwa semvumba kuti tihwine mutambo wedu wesemi-final kusvika kufainari.
“Kutamba mitambo yemikombe zvinopa mukana wekunyora nhoroondo. Nenyasha dzaMwari, ticharwa kuti tihwine mukombe uyu,” anodaro Mushangazhike.
Murairidzi weTrojan Stars, Clifford Sakala, anoti mutambo wechikwata chake neGolden Eagles uchange wakaoma sezvo Gondo Harishaye ichitamba nhabvu inonwisa mvura.
“Tiri kutarisira zvikuru kusangana neGolden Eagles mumutambo wedu wesemi-final uyo tinoziva kuti unenge usiri nyore. Asi chatinoziva ndechekuti ticharwa kuti tifambire mberi. Tiri kugadzirira zvakasimba mutambo wedu watakatarisana nawo,” anodaro Sakala.
PSL: Vanhu votaura19 May, 2022
Mitambo yeDivision One yosimudzira19 May, 2022
Musona asiya kutambira maWarriors19 May, 2022